भिडियो कलहरू फेसबुक मेसेन्जर लाइट | ग्याजेट समाचार
फेसबुक मेसेन्जर लाइट सामाजिक नेटवर्क कुराकानी अनुप्रयोगको प्रकाश संस्करण हो। यो खास गरी कम-अन्त उपकरणहरूको लागि सिर्जना गरिएको संस्करण हो, जसमा कम पावर र कम र्याम हुन्छ। यस तरिकाले, अनुप्रयोगको यस संस्करणले कम ठाउँ लिन्छ र उपकरणमा कम स्रोतहरू खान्छ। तर प्रयोगकर्ताले अनुप्रयोगको आनन्द लिन्छ।
कहिलेकाँही केहि प्रकार्यहरू प्राय: हटाइन्छन्, ताकि अनुप्रयोग हल्का हुन्छ। तर, फेसबुक मेसेन्जर लाइट नयाँ कार्यहरू समावेश रोक्दैन। अन्तिममा कम्तिमा जिज्ञासु छ। च्याट अनुप्रयोग प्रवेश गरे पछि भिडियो कलहरू.
यो नयाँ प्रकार्य पहिले नै उपयोगकर्ताहरुमा पुग्न सक्दछ जोसँग अनुप्रयोग स्थापना छ। धेरै नै सम्भावनाहरू, तपाईसँग पहिल्यै नै छ वा यो केहि दिनहरूमा आउनेछ। त्यसोभए अनुप्रयोगमा च्याटहरू भित्र भिडियो कलहरू सम्पन्न गर्न सम्भव हुनेछ।
भिडियो कलहरू उपयोगी हुन सक्छ, यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, तर यो केहि अजीब छ कि फेसबुक मेसेन्जर लाइट तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न गइरहेको छ। यो कम अनुप्रयोग लिन र सामान्य अनुप्रयोग भन्दा धेरै कम स्रोतहरु खपत डिजाइन गरिएको अनुप्रयोग हो। त्यसकारण धेरै यस्तो खपत हुने भिडियो कलहरू जस्ता प्रकार्य पेश गर्दै, कम्तिमा अनौंठो हुन्छ।
फेसबुकसँग यसको सबै अनुप्रयोगहरूमा समान प्रकार्यहरू सुरू गर्न एक किसिमको जुनून छ। किनकि तपाईं व्हाट्सएपमा भिडियो कल गर्न सक्नुहुनेछ, अब फेसबुक मेसेन्जर लाइट र चाँडै इन्स्टाग्राममा यस फैशनमा थप्न जाँदैछ।
हामीले हेर्नुपर्नेछ कि यी भिडियो कलहरू अनुप्रयोगमा कसरी काम गर्छन्। जे होस् कागजमा यो धेरै राम्रो विचार जस्तो देखिदैन। यो सम्भावना देखिन्छ कि अनुप्रयोगको स्रोत खपत उनीहरू प्रयोग भइरहेको बेलामा उल्लेखनीय बृद्धि हुनेछ। तिनीहरूको अपरेसन धेरै सरल छ। तपाईं छविमा देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो कल आइकन अब च्याटको माथि दायाँ तिर देखा पर्दछ. तपाईं यस प्रकार्यको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » फेसबुक मेसेन्जर लाइट भिडियो कल परिचय